Ushiye kukhalwa umlilo oqubuke kwamabili - Ilanga News
Home Izindaba Ushiye kukhalwa umlilo oqubuke kwamabili
Ushiye kukhalwa umlilo oqubuke kwamabili
Kubhubhe amalungu amane omndeni elesihlanu lisesibhedlela
USHIYE kukhalwa umlilo kubhubha umndeni wakwaMabaso eZakheni, eMnambithi usha nendlu phakathi kwamabili ngoLwesihlanu njengoba kushe kwashona owesifazane osekhulile nezingane ezintathu kanti eyesine kwembulwa kwembeswa kuyona esibhedlela.
Lo mlilo – umndeni othi kawazi ukuthi uqutshulwe yini – kuthiwa uqale ekamelweni elingalali muntu, wadlulela lapho bekulele khona uNkz Philisiwe Hlubi (58), uSekwanele Mabaso (12) (osesibhedlela), u-Angel Mabaso (10), uXolile Mabaso (7) no-Enzo Mabaso onezinyanga eziwu-8 ezelwe.
Ekhuluma neLANGA uMnu Mduduzi Mabaso (39) oyindodana kaNkz Hlubi, uthe umlilo ubonwe ngomakhelwane sekunekloba eligqamuka endlini liphuma nangamawindi.
“Bathe bethi baphusha isicabha, sangavuleka kanti umama uwele ngakusona ethi uzama ukuphuma. Kusize umfana wakwamakhelwane osikhahlele kakhulu savuleka.
“Umama ubesaphila, kodwa bekuthi uma bethi bayambamba, inyama isalele ezandleni, baze bathatha ithawula bambopha ngalo. U-Angel noXolile batholwe ngaphansi kombhede sebeshonile, u-Enzo watholwa ngasekhishini, engicabanga ukuthi ubethi ulandela ugogo kodwa washona engakafiki ngasemnyango.
“USekwanele utholwe esaphila waphuthunyiswa esibhedlela nomama kanti umama uzoshona ekuseni,” kusho uMnu Mabaso.
Uthi namanje kabazi ukuthi umlilo uqutshulwe yini njengoba kuleli kamelo oqale kulona beku-ngalali muntu.
Abakwa-Eskom nabo bafikile bathi kazikho izintambo zikagesi ezixhunywe kabi ebezingenza kuqubuke umlilo. Uthi sebethembe uphenyo lwamaphoyisa olungase lubanike izimpendulo ukuthi umlilo udalwe yini.
“Udadewethu omdala okungunina ka-Enzo kwenzeka lesi sigameko nje, ubephume ekhaya ngo-11 ebusuku ngalezi zimoto eziqashwayo ezilayisha abadayisi abasuke beyo-oda eThekwini, kuye kwaphoqeleka ukuba ajike endleleni sekwenzeke lesi sigameko.
“Sibuhlungu kunzima ukwamukela okwenzekile ukuthi kushone abantu abaningi kangaka ngosuku olulodwa bengagulanga,” kusho uMnu Mabaso.
Uthi bonke abashonile bazofihlwa ngoLwesine njengoba okwamanje besematasa nezinhlelo zonke ezifanele.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Senzo Mzila, uthe lesi sigameko simthinte kakhulu ungqongqoshe walo mnyango, uMnu Sipho Hlomuka wayobhonga emswanini kulo mndeni ngoMgqibelo.
“Ungqongqoshe njengoba kade ekulo mndeni, wenze isiqiniseko sokuthi uyesekwa ngendlela efanele kulesi sikhathi esinzima,” kusho uMnu Mzila.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe idokodo lophenyo ngalolu daba.
Previous articleUsomatekisi udutshulwe wafa nenyanga
Next articleUthi ushaqekile uMgube ngesenzo seGcokama